मौरी पालेरै वार्षिक पाँच लाख आम्दानी, मौरीको घर पनि राम्रो बिक्री हुने – पुरा पढ्नुहोस्……
मौरी पालेरै वार्षिक पाँच लाख आम्दानी, मौरीको घर पनि राम्रो बिक्री हुने
गोरखा : गोरखाका एक कृषकले मौरीपालनबाट मासिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । गोरखा नगरपालिका–११ स्थित तेह्रकिलोका कृषक तुलसीप्रसाद देवकोटाले मौरीपालन गरी मह तथा मौरीसहितको घार बेचेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएका हुन् ।
मङ्सिर चैत लगायतको समयमा एक घार मौरीले चार पाथीसम्म मह उत्पादन गर्ने देवकोटा बताउँछन् । देवकोटाका अनुसार मङ्सिर र चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै मह उत्पादन हुने गर्दछ । मह उत्पादनसँगै उनले घार पनि बिक्री गर्दै आएका छन् ।
‘‘पहिलोको तुलनामा अहिले महभन्दा मौरीसहितको घार बिक्रीबाट बढी आम्दानी हुने गरेको छ,’’ देवकोटाले भने । आजभोलि एक घारको रु १० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । गएको वर्ष मात्र करीब ४५ घार मौरी बिक्री गरेको उनले जानकारी दि ए ।
मौरीपालन व्यवसायका लागि फूल फुल्ने जातका तरकारी बाली तथा फलफूल खेती पनि आवश्यक पर्ने भएकाले समय अनुसारका विभिन्न खेतीबालीसमेत गर्दै आएको कृषक देवकोटाको भनाइ छ । ‘‘मौरीपालनका लागि चरन क्षेत्र आवश्यक पर्ने भएकाले मौसमअनुसार घर वरिपरि तोरी खेती पनि गर्दै आएको छु,’’ देवकोटाले भने, ‘चिलाउने, टाँकी, कटुसलगायतका बोटबिरुवाका फूल मौरीले मन पराउने हुँदा त्यस्ता खालका बोटबिरुवा समेत हुर्काउँदै गरेको छु ।’
बढी फूल फूल्ने मौसममा राम्रो ध्यान दिन सके एक घार मौरीबाट तीनदेखि छ घारसम्म बनाउन सकिने उहाँले बताए । उनले मौरीलाई खानेकुराको अभाव भएमा वा घारमा केही वस्तुले दुःख दिएमा एक घारको मौरीले अर्को घारको मौरीलाई दुःख दिने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । मौरीपालनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गोरखाबाट रु दुई लाख अनुदान प्राप्त भएको देवकोटाले बताए।
Prevनेपाल आइडलकी रमाको दुखको कहानी , सुन्दा कसको मन नरोला ( भिडियो सहित )
Nextआजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल असोज १८ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ अक्टुबर ४ तारीख
नेपालीको लागि आफ्नो ज्या:न खुकु:रीको धार:मा राखे रविले ! अब जनताले राख्ने कि नराख्ने ? एक चेलीको यस्तो..(भिडियो)
आज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ… साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ
कैलालीबाट पत्रकार रबिलामिछाने बिशेस लाइभ हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
दुखद खबर : बाढीले ८ घर बगाउँदा २ को मृ,त्यु, १८ बेपत्ता